Otu esi eme draịva hamster na draịvụ ike - Ikkaro
Inicio >> Mascotas >> Otu esi eme draịva hamster na draịvụ ike
Otu esi eme draịva hamster na draịvụ ike
Lee, anyị nwere ụzọ ọzọ jiri uru nke ihe ochie siri ike mbanye, na-eme ya a wheel maka hamsters. Ebumnuche nke wiilị "teknụzụ" a bụ ime ka ọ dị jụụ ka o kwe omume ka mkpọtụ nke hamster na-agba n'ime adịghị egbochi anyị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ zụta wiilị hamster dị jụụ n'ụlọ ahịa gị ị ga-achọpụta na ha dị oke ọnụ. Site na mbanye anataghị ikike a, ị ga-enweta hamster gị ka ọ na-agba ọsọ ọsọ nke ọkụ na-enweghị mkpọtụ ọ bụla.
Anyị ga-achọ diski ike, site na nke anyị ga-esi wepụ moto moto.
Lelee kposara abụọ na - apụ apụ, nke ị ga - ewepu iji kewaa elu nke elu site na axle.
N'aka nke ọzọ anyị chọrọ ihe ga-abụ wiilị nke ya Hamster, ihe owuwu ya ma ọ bụ etiti ya, maka nke a ka anyị ga-ewere ite, na tỌ ga-ezuru n'ihi na ọ bụrụ na anyị hamster agaghị achọ na-agba ọsọ.
Anyị ga-ebipụ ya na mkpa ma ọ bụ ngwa mkpaji. Easyzọ dị mfe iji kaa ya bụ iji ụfọdụ akwụkwọ emere nkwado, maka pensụl anyị. Dị Mfe, ngwa ngwa ma dị irè.
Anyị na-ebipụ na njikere
Iji nye ya njedebe ikpeazụ anyị ga-ekpuchi ya, ka hamster wee nwee ike ịgba ọsọ nke ọma nakwa na ọ naghị eji aka ya egbutu onwe ya. Na mgbakwunye inye ya ihe mara mma. Na nkuzi ha na-eji ụfụfụ emecha, eziokwu bụ na ị ga-eche banyere ihe ị ga-etinye, nke mere na ọ dị ọcha dị ka o kwere mee ma dị mfe ihicha.
Hamster mmamịrị abụghị cologne ma ha abụghị anụmanụ kachasị dị ọcha n'ụwa ma ¬¬
Ugbu a, anyị ga-aga na di na nwunye ahụ dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ. Cheta, na ewepu 2 kposara na efere bụ nke na-aga n'ime wiil ahụ na injin ya n'èzí
Dabere na ike, nsogbu nwere ike ibilite, nke na-esighi ike na mepụta mkpọtụ. Iji dozie nke a A na-eme ka ntọala ahụ sie ike na ihe ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe. Dị ka o kwesịrị, belata akụkụ nke okirikiri nke ntọala ahụ ma jikọta ya ọnụ. Na nkuzi ha emeela ọgbaghara na ihe ha nwere, mepụta akwara abụọ na osisi balsa.
Anyị ga-enwe ihe niile njikere. Ugbu a abia ezigbo, maka 10.….
Ebe ọ bụ na anyị nwere njikọta moto, anyị nwere ike ijikọ eriri ma tụọ voltaji nke obere oke anyị na-agba ọsọ na nke a, anyị nwere ike nweta ọsọ, gosi ya na ngosipụta, wdg.
A geeky hamster, na omenala mgbatị ;-)
Ihe ndị ọzọ anyị nwere ike iji draịvụ ike ochie eme
Otu esi eme sander si draịvụ ike
Ebumnuche imegharị diski ike
Etu esi etinye ngwa APK na gam akporo
Etu esi emegharị usoro olulu mmiri ...
Categories Mascotas Igodo bọtịnụ
Arụ ụlọ ịgba rọketi
Otu esi eme uzo onu ogugu osisi
2 kwuru na "Otu esi eme ka wiilị hamster na draịvụ ike"
June 7, 2014 na 1:35 elekere
Nke a bụ nnukwu nwoke m ga-eme ya ozugbo m nwere ike ma ọ bụ nweta draịvụ ike ị nwere ike ide na email m yamilapompa@infomed.sld.cu Ee, biko, ị nwere ike ịgwa m nke ahụ gbasara ihe ngosi, daalụ
Abụọ 27, 2018 na 8:38 pm
Nnọọ! M hụrụ gị n'anya na peeji nke, M a na-akwado nke iwuli ihe aka na echiche ị na-enye iji nweta site na-eji arụrụ n'ụlọ ngwá dị ukwuu. Ọ ga-amasị m ịnọgide na-ahụ akwụkwọ gị ma na-akpọtụrụ! Ekele si Caracas, Venezuela